Tiknoolajiyaddu ma yareynayso xoogaa ... er Flop! | Martech Zone
Khamiis, May 28, 2015 Khamiis, May 28, 2015 Douglas Karr
Gordon E. Moore wuxuu ahaa aasaasihii Intel iyo Fairchild Semiconductor oo qoray warqad 50 sano ka hor saadaaliyay in la laba laabayo tirada qaybaha halkii wareeg oo isku dhafan sanad kasta. 10 sano kadib, sanadkii 1975, wuxuu dib u eegay saadaasha 2dii sanaba hal mar his saadaashiisuna inta badan wey saxneyd. Hadda waxaa loo yaqaan Sharciga Moore.
Si aad u bixiso tusaale, Apple Watch (taas oo aan si farxad leh u leeyahay oo aan aad ugula taliyo) waxay leedahay awood wax ku ool ah oo qiyaastii ah 2 iPhone 4 casriga ah. Waxay aad uga fiicantahay koombiyuutarka 1985 Cray-2… curcurkaaga. Taasi waa waxqabadkii la siiyay raadadka aaladda oo dhan waxaana igu adkahay inaan ka fikiro xitaa Gordon Moore wuxuu moodayay inaan halkaan joogno maanta.
Kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ayaa sii waday inay kordhiyaan waxqabadka inta ay hoos u dhacayaan cabbirka, taas oo u oggolaanaysa hal-abuurnimo aan injineeradu waligood u maleyneynin inay suurtagal tahay. 40 sano ka hor, dadka intiisa badani ma rumaysan doonaan inaan si dhakhso leh u heli doonno macluumaad aan xad lahayn oo ka yimaada calaacasha gacantaada.
Tani maxay uga dhigan tahay suuqleyda? IMO, waxay ka dhigan tahay inaan ku jirno marxaladihii ugu horreeyay ee waxa lagu dhammaystiri karo isku-dhafka suuq-geynta suuq-geynta iyo saadaalinta suuq-geynta. Casri ah Analytics dhuftoyinka waa kuwo quruxsan - qabashada tanno xog ah iyo bixinta warbixin fudud. Nidaamyada xogta ee waaweyni waxay hormarinayaan inay kaxeeyaan ikhtiraacida waxsoosaarka suuqgeynta si loo hormariyo nidaamyada warbixinta ee matoorada saadaalinta - taas oo hagaajin doonta khibrada isticmaalaha iyo natiijooyinka suuqgeynta.
Awoodda wax-qabadku waa mid muhiim ah maxaa yeelay aaladaha lagu horumariyo barnaamijyadan aan xadka lahayn waxay noqdaan kuwo fudud oo fudud in la sameeyo. Hal tusaale, ama koorso, waa mashiinno xog-ururin weyn. Adoo horumarinaya is-wanaajinta xogta iyo matoorada weydiinta, shirkaduhu waxay ku riixi karaan ilaha horumarinta si ay u dhisaan astaamo cusub - oo aan la jaan-qaadin oo loo hagaajinin keydadka macluumaadka si ay si hufan ugu shaqeeyaan. Kuwani waa waqtiyo xiiso leh!
Tags: sharciga mooresAwoodda wax soo saarka